Mateo Asɛmpa No 7:1-29
BEPƆW SO ASƐNKA (1-27)
Munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn (1-6)
Monkɔ so mmisa, monkɔ so nhwehwɛ, monkɔ so mmom (7-11)
Mmara titiriw a ɛma yɛne nkurɔfo tena asomdwoe mu (12)
Ɔpon teateaa no (13, 14)
Wɔn aba na wɔde behu wɔn (15-23)
Ɔdan a esi ɔbotan so, ɔdan a esi anwea so (24-27)
Yesu nkyerɛkyerɛ maa nnipadɔm no ho dwiriw wɔn (28, 29)
7 “Munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn,+ na wɔammu mo atɛn. 2 Na atɛn a mubu no, ɛno ara na wobebu mo;+ ade a mode susuw ma nkurɔfo no, ɛno ara na wɔde besusuw ama mo.+ 3 Adɛn nti na wohwɛ ntɛtɛwa a ɛda wo nua aniwa so, na wunhu dua* a ɛda w’ankasa aniwa so?+ 4 Anaasɛ wobɛyɛ dɛn atumi aka akyerɛ wo nua sɛ, ‘Ma minyi ntɛtɛwa no mfi w’aniwa so,’ bere a hwɛ! dua* da w’ankasa aniwa so? 5 Nyaatwomni! Di kan yi dua* no fi w’ankasa aniwa so; ɛno bɛma woahu ade yiye na woayi ntɛtɛwa no afi wo nua aniwa so. 6 “Mommfa ade a ɛyɛ kronkron mmma nkraman, na monntow mo abohene nngu mprako anim,+ na wɔamfa wɔn nan antiatia so, na wɔannan wɔn ho ammɛtetew mo mu. 7 “Monkɔ so mmisa, na wɔde bɛma mo;+ monkɔ so nhwehwɛ, na mubehu; monkɔ so mmom, na wobebue mo.+ 8 Efisɛ obiara a obisa no, ne nsa bɛka,+ na obiara a ɔhwehwɛ no, obehu, na obiara a ɔbɔ mu no, wobebue no. 9 Na mo mu hena na ne ba bisa no paanoo a, ɔbɛma no ɔbo? 10 Anaasɛ obisa no apataa a, ɔbɛma no ɔwɔ? 11 Enti sɛ mo a moyɛ abɔnefo mpo nim sɛnea moma mo mma akyɛde pa a, ɛnde mo Agya a ɔwɔ soro no nso ɛ? Ɔde nneɛma pa+ bɛma wɔn a wobisa no+ no ama aboro so! 12 “Enti biribiara a mopɛ sɛ nnipa yɛ ma mo no, mo nso monyɛ mma wɔn saa ara.+ Nokwarem no, saa na Mmara ne Adiyifo no kyerɛ.+ 13 “Momfa ɔpon teateaa no mu,+ efisɛ ɔpon a ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛw no kɔ ɔsɛe mu, na wɔn a wɔnam saa pon no mu no yɛ bebree. 14 Na ɔpon teateaa ne ɔkwan ketewa no ne nea ɛkɔ nkwa mu, na nnipa kakraa bi na wohu.+ 15 “Monhwɛ yiye wɔ atoro adiyifo ho.+ Wɔde nguan nhoma kata wɔn ho ba mo nkyɛn,+ nanso wɔyɛ mpataku*+ a wɔfom aduan.* 16 Wɔn aba na mode behu wɔn. Nkurɔfo rentumi ntetew bobe wɔ nsɔe so da, na wɔrentumi ntetew borɔdɔma nso wɔ nkyɛkyerɛ so da. Ɛnte saa anaa?+ 17 Saa ara na dua pa biara sow aba pa, na dua bɔne biara sow aba bɔne.+ 18 Dua pa rentumi nsow aba bɔne, na dua bɔne rentumi nsow aba pa.+ 19 Dua biara a ɛnsow aba pa no, wotwa na wɔde gu ogya mu.+ 20 Ɛno nti, saa atoro adiyifo no aba na mode behu wɔn.+ 21 “Ɛnyɛ obiara a ose me sɛ, ‘Awurade, Awurade’ no na ɔbɛkɔ ɔsoro Ahenni no mu; mmom nea ɔyɛ m’Agya a ɔwɔ soro no apɛde no,+ ɔno na ɔbɛkɔ mu. 22 Ɛda no, nnipa bebree bɛka akyerɛ me sɛ: ‘Awurade, Awurade,+ yɛamfa wo din anhyɛ nkɔm, na yɛamfa wo din antu ahonhommɔne, na yɛamfa wo din anyɛ anwonwade* bebree anaa?’+ 23 Ɛnna mɛka akyerɛ wɔn sɛ: ‘Minnim mo da! Mumfi me so nkɔ, mo a moyɛ nneɛma bɔne!*+ 24 “Enti obiara a ɔte me nsɛm yi na ɔde yɛ adwuma no, ɔbɛyɛ sɛ onyansafo* bi a osii ne dan sii ɔbotan so.+ 25 Na osu tɔe na eyirii, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ ɔdan no, nanso ammu, efisɛ na wasi asi ɔbotan so. 26 Afei, obiara a ɔte me nsɛm yi na ɔmfa nyɛ adwuma no, ɔbɛyɛ sɛ ɔkwasea bi a osii ne dan sii anwea so.+ 27 Na osu tɔe na eyirii, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ ɔdan no+ ma edwiriw gui, na ebubui pasaa.” 28 Bere a Yesu wiee nsɛm yi no, ɔkwan a ɔfaa so kyerɛkyerɛe no maa nnipadɔm no ho dwiriw wɔn,+ 29 efisɛ na ɔrekyerɛkyerɛ wɔn te sɛ obi a ɔwɔ tumi,+ na ɛnte sɛ wɔn akyerɛwfo no.
^ Anaa “dua a wɔde bɔ ɔdan so; mpuran.”
^ Wuram kraman bi.
^ Anaa “mpataku adifudepɛfo.”
^ Anaa “moto mmara!”
^ Anaa “ɔbadwemma.”